ဒီစာလေးကို ဆုံးတဲ့အထိ ဖတ်ကြည့်ပေးပါ …. – Shinyoon
ဒီစာလေးကို ဆုံးတဲ့အထိ ဖတ်ကြည့်ပေးပါ ….
January 3, 2021 by Shin Yoon
ဒီတစ်ခါတော့ မိန်းကလေးတွေဖတ်ဖို့ပါ … ကိုယ့်အနားက ချစ်သူကို သိပ်ချစ်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်အနားက ထွက်မသွားစေချင်ဘူးဆိုရင် ဒီစာလေးကို ညီမလေး ဆုံးတဲ့အထိ ဖတ်ကြည့်ပေးပါ ….
ယောက်ျားလေးတွေတဲ့ သန်မာတယ်ဆိုကြပေမယ့် ရင့်ကျက်တယ်ဆိုပေမယ့် သူ့ချစ်သူကောင်မလေးအပေါ်တော့ တစ်ခါတစ်လေ သိပ်ကို ကလေးဆန်ကြတယ် … ပိုပြီးတော့လဲ ဂရုစိုက်ခံချင်ကြတာလေ …. ကိုယ့်ကို သူပစ်ထားတုန်းက ပြသနာမဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ်ပစ်ထားမိတဲ့အခါ အပြစ်အကြီးကြီးဖြစ်သွားတတ်တယ်
နားလည်ပေးလိုက်ပါ … ယောက်ျားလေးဆိုတဲ့အတိုင်း အပေါင်းအသင်းဆိုတာရှိသလို မိတ်ဆွေဆိုတာလဲ ရှိတတ်တယ် … သူငယ်ချင်းနဲ့ ငါ ဘယ်သူကိုရွေးမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုး ဘယ်တော့မှမမေးပဲ တစ်ခါတစ်ရံတော့ ကြည်ကြည်ဖြူဖြူလေးပဲ … ခွင့်ပြုပေးလိုက်ပါ …
ယုံကြည်ပါ … တချို့ ယောက်ျားလေးတွေမှာ မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းဆိုတာ ရှိတတ်တယ် … ပြီးတော့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ထဲမှာ မိန်းကလေးတွေ ရှိနေတတ်တယ် … ဟိုလူနဲ့ဒီလူနဲ့ ခဏခဏ မစွပ်စွဲပဲ တစ်ခါတစ်ရံ ယုံကြည်မှုလေးပေးလိုက်ပါ သဝန်တိုတယ်ဆိုတာ ချစ်လို့ဆိုပေမယ့် အမြဲတမ်းသဝန်တိုခံရတဲ့အခါ သူ့အတွက် နေရထိုင်ရခက်ခဲတတ်တယ်လေ. …
ဒီလက်ကို မြဲချင်တယ်ဆိုရင် … တစ်ခါတစ်ရံတော့ ချစ်ပြတတ်ဖို့လိုပါတယ် .. ဘာကြောင့်လဲမေးရင် အမြဲတမ်းနားလည်ပေး အလိုလိုက်ပေးပေမယ့်လဲ နဲနဲလေးမှ ချစ်ပြမခံရတဲ့အခါ သူ ကိုယ်တိုင်က ဘာမှမဖြစ်ရင်တောင် သူ့သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေကြားမှာ မျက်နှာငယ်စရာတွေဖြစ်တတ်တယ်
တစ်ခါတစ်လေ …. သံသယတွေများနေရင်းက မဝေးသင့်ပဲ ဝေးသွားရတာတွေရှိတယ် … ပြသနာဖြစ်ရုံနဲ့ လမ်းခွဲမယ် ပြတ်စဲမယ် ခဏခဏမပြောပဲနေတာကောင်းမယ် … ခဏခဏပြောခံလာရတဲ့အခါ ငါ ဆိုတာ သူ့အတွက်မလိုအပ်ပါလားဆိုတဲ့ အတွေးတွေ ခေါင်းထဲရောက်သွားတတ်တယ် …
တကယ်ချစ်တဲ့သူတိုင်းကို ပျော်စေချင်ခဲ့သလို ဆုံခွင့်တွေရခဲ့သလို သက်ဆုံးတိုင်ထိ လက်တွဲတွေ မြဲစေချင်ပါတယ် … တစ်ခါတစ်လေကျတော့ ကိုယ်မသိမသာ မှားနေတဲ့အရာလေးတွေက လမ်းခွဲပြတ်စဲခြင်းတွေကို ဖြစ်လာတတ်တယ်လေ … သူ့ကိုတကယ်ချစ်ရင် … သူကလဲ ကိုယ့်ကို တကယ်ချစ်နေမယ်ဆိုရင် … ကိုယ်လဲ ချစ်တတ်ဖို့လိုသေးတယ် ….
ဒီတစ္ခါေတာ့ မိန္းကေလးေတြဖတ္ဖို့ပါ … ကိုယ့္အနားက ခ်စ္သူကို သိပ္ခ်စ္တယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္အနားက ထြက္မသြားေစခ်င္ဘူးဆုိရင္ ဒီစာေလးကို ညီမေလး ဆံုးတဲ့အထိ ဖတ္ၾကည့္ေပးပါ ….
ေယာက္်ားေလးေတြတဲ့ သန္မာတယ္ဆိုၾကေပမယ့္ ရင့္က်က္တယ္ဆိုေပမယ့္ သူ့ခ်စ္သူေကာင္မေလးအေပၚေတာ့ တစ္ခါတစ္ေလ သိပ္ကုိ ကေလးဆန္ၾကတယ္ … ပုိျပီးေတာ့လဲ ဂရုစိုက္ခံခ်င္ၾကတာေလ …. ကိုယ့္ကို သူပစ္ထားတုန္းက ျပသနာမဟုတ္ေပမယ့္ ကိုယ္ပစ္ထားမိတဲ့အခါ အျပစ္အၾကီးၾကီးျဖစ္သြားတတ္တယ္
နားလည္ေပးလိုက္ပါ … ေယာက္်ားေလးဆိုတဲ့အတိုင္း အေပါင္းအသင္းဆိုတာရွိသလုိ မိတ္ေဆြဆိုတာလဲ ရွိတတ္တယ္ … သူငယ္ခ်င္းနဲ႕ ငါ ဘယ္သူကိုေရြးမလဲဆိုတဲ့ေမးခြန္းမ်ိဳး ဘယ္ေတာ့မွမေမးပဲ တစ္ခါတစ္ရံေတာ့ ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴေလးပဲ … ခြင့္ျပဳေပးလုိက္ပါ …
ယံုၾကည္ပါ … တခ်ိဳ႕ ေယာက္်ားေလးေတြမွာ မိန္းကေလးသူငယ္ခ်င္းဆိုတာ ရွိတတ္တယ္ … ျပီးေတာ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ထဲမွာ မိန္းကေလးေတြ ရွိေနတတ္တယ္ … ဟိုလူနဲ႕ဒီလူနဲ႕ ခဏခဏ မစြပ္စြဲပဲ တစ္ခါတစ္ရံ ယံုၾကည္မႈေလးေပးလုိက္ပါ သ၀န္တိုတယ္ဆိုတာ ခ်စ္လို့ဆိုေပမယ့္ အျမဲတမ္းသ၀န္တိုခံရတဲ့အခါ သူ့အတြက္ ေနရထိုင္ရခက္ခဲတတ္တယ္ေလ. …
ဒီလက္ကို ျမဲခ်င္တယ္ဆိုရင္ … တစ္ခါတစ္ရံေတာ့ ခ်စ္ျပတတ္ဖို့လုိပါတယ္ .. ဘာေၾကာင့္လဲေမးရင္ အျမဲတမ္းနားလည္ေပး အလိုလိုက္ေပးေပမယ့္လဲ နဲနဲေလးမွ ခ်စ္ျပမခံရတဲ့အခါ သူ ကို္ယ္တိုင္က ဘာမွမျဖစ္ရင္ေတာင္ သူ့သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြေတြၾကားမွာ မ်က္ႏွာငယ္စရာေတြျဖစ္တတ္တယ္
တစ္ခါတစ္ေလ …. သံသယေတြမ်ားေနရင္းက မေ၀းသင့္ပဲ ေ၀းသြားရတာေတြရွိတယ္ … ျပသနာျဖစ္ရံုနဲ႕ လမ္းခြဲမယ္ ျပတ္စဲမယ္ ခဏခဏမေျပာပဲေနတာေကာင္းမယ္ … ခဏခဏေျပာခံလာရတဲ့အခါ ငါ ဆိုတာ သူ့အတြက္မလုိအပ္ပါလားဆိုတဲ့ အေတြးေတြ ေခါင္းထဲေရာက္သြားတတ္တယ္ …
တကယ္ခ်စ္တဲ့သူတိုင္းကို ေပ်ာ္ေစခ်င္ခဲ့သလို ဆံုခြင့္ေတြရခဲ့သလုိ သက္ဆံုးတိုင္ထိ လက္တြဲေတြ ျမဲေစခ်င္ပါတယ္ … တစ္ခါတစ္ေလက်ေတာ့ ကိုယ္မသိမသာ မွားေနတဲ့အရာေလးေတြက လမ္းခြဲျပတ္စဲျခင္းေတြကို ျဖစ္လာတတ္တယ္ေလ … သူ့ကိုတကယ္ခ်စ္ရင္ … သူကလဲ ကိုယ့္ကို တကယ္ခ်စ္ေနမယ္ဆိုရင္ … ကိုယ္လဲ ခ်စ္တတ္ဖို့လုိေသးတယ္ ….
အရင်လိုမဟုတ်တော့ပဲ ပြောင်းလဲသွားတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အနောက်မှာ အရင်လိုမဟုတ်တော့တဲ့ ချစ်သူတစ်ယောက်ရှိတယ် ….
ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ ကျွန်မအပေါ် ကြင်နာပါ ….